Anontanio Semalt Expert: Ahoana ny fanesorana ny fanodinkodinam-panadiovana amin'ny Google Analytics
Raha toa ka misy fiantraikany eo amin'ny sehatra mifandraika amin'ny Google Analytics ny domains na subdomains, dia mety tsy hahazo ny tatitra marina ianao raha tsy efa nanitsy ny fanovana ny kaontinao. Ireo fitsangatsanganana sandoka na ghost dia tsy mitsahatra avy amin'ny tahiry ara-tantara Google Analytics. Izany no antony tokony hanaiky anao sy hanakana azy ireo haingana araka izay azo atao.
Tao anatin'ny volana vitsivitsy lasa izay, maro ireo webmasters sy mpandraharaha no nitatitra momba ny fitsidihana diso sy ny spam referral. Tahaka ny hoe lasa manaparitaka isan'andro ny tsipika fanavaozana. Soa ihany fa misy fomba sasany handosirana azy, izay namaritan'i Max Bell, manam-pahaizana ambony indrindra an'ny Semalt , etsy ambany.
Amboary ny votoatin'ny Google Analytics
Ny fomba voalohany sy tsara indrindra dia ny manitsy ny fanovana ao amin'ny kaontinao Google Analytics. Tokony hanakana ny adiresy IP tsy mampiahiahy ianao ary hanadihady ny momba ny loharanom-pifandraisana. Noho izany dia tokony hanamarina ny tatitra ataonao Google Analytics isan'andro na isan-kerinandro. Raha hitanao fa manimba ny angon-drakitra misy anao amin'ny tsipika fanovàna, dia izao no fotoana hanesorana azy ireo amin'ny kaonty Google Analytics alohan'ny hanohanan'ny tranokala ny tranokalanao .
Fanomezana an-tsokosoko fanta-daza sy mpitsikilo fitsangatsanganana an-tsarimihetsika
Misy karazana fitsangatsanganana roa karazana: spam referendum fanta-daza sy spam referendum ra. Ny adiresy Ghost referral dia manondro ny fampiasana ny Google Analytics amin'ny fanehoana ny habetsaky ny fitsidihana fidirana amin'ny tranonkalanao. Tsy tena izy ireo ary tsy misy ifandraisany amin'ny votoatinao. Raha ny tokony ho izy dia omeny anao isan-jato ny taham-pidirana avo lenta satria tsy misy mamaky ny lahatsoratrao ary mipoitra fotsiny hitsidika ny tranokalanao. Ny vokatr'izy ireo dia tsy marina raha tsy mahazo ny fifamoivoizana marina ianao..Ny iray amin'ireo fomba tsara indrindra hisorohana azy dia ny miala amin'ny tranonkala toy izany darodar.com, social-button.com, ary hulfingtonpost.com.
Ny spam fanondroana ny mpitsikilo dia ny bots amin'ny tranonkalanao fa tsy liana amin'ny votoatiny na ny tranonkala. Ny tanjon'izy ireo dia ny mandika ny tranokalanao amin'ny valin'ny fikarohana. Tahaka ny hoe spam fitsangatsanganana an-tsokosoko, ny spam referendra mpitsikilo dia aseho amin'ny tatitra Google Analytics, fa ny ankamaroan'izy ireo dia tsy mampidi-doza. Ny ohatra tsara indrindra dia tsara indrindra seo solutions.com ary buttonsforwebsite.com. Azonao atao ny manala ny spam amin'ny anaran'ny mpitsikilika amin'ny alàlan'ny fisorohana ny serivisy atolotra an'ireny tranonkala ireny.
Azonao atao ny manala ny spam fanavaozana amin'ny alàlan'ny fanitsiana sy famoronana segondra misimisy ao amin'ny kaontinao Google Analytics. Noho izany, tokony hojerenao aloha ny karazana fitsidihana azonao. Ataovy azo antoka fa ara-dalàna izy ireo, ary raha tsy marina izy ireo, dia tokony hamorona sintonina ianao mba hanafoanana azy ireo. Azonao atao koa ny manangana sehatra ary mametraka ny fanalahidin'ny Advanced Segments alohan'ny hanakatonana ny varavarankely. Aza adino ny manome anarana manokana amin'ny segondra rehetra mba tsy hisian'ny fifanjevoana amin'ny ho avy.
Tsara ihany koa ny manangana sehatra manokana hanivanana ny angona avy amin'ny kaonty Google Analytics. Ataovy azo antoka fa nesorina tanteraka avy amin'ny sehatry ny referanso izy ireo mba hahafahanao mamaha ny olana ao anatin'ny minitra vitsy. Amin'ny alàlan'ity dingana ity dia afaka mampihena ny taham-pidinao ianao ary afaka manatsara ny kalitao amin'ny tranokala Source .